Yugyan Daily » के भिटामिन–डि कोरोना विरुद्ध उपयोगी हुनसक्छ ?
के हामीले घाम ताप्नु पर्छ ?
के कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि भिटामिन–डी उपयोगी हुनसक्छ ? अनुसन्धानकर्तामाझ भिटामिन–डीको प्रश्न प्रमुखताका साथ उठिरहेको छ ।
ब्रिटिश सरकारमा स्वस्थ्य र पोषणसँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था साइन्टिफिक एडभाइजरी कमिशन अन न्युट्रिशन र नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड केयर एक्सलेन्सले कोरोनामा भिटामिन डिको भूमिकाबारे रिपोर्ट तयार गरेका छन् ।
भिटामिन डिलाई लिएर के सल्लाह दिइएको छ ?
कोरोना महामारीको क्रममा धेरैजसो घरभित्र बसेका छन् । घर बाहिर खुला रुपमा हिँडडुल गर्ने अनुकुलता छैन । यस्तो अवस्थामा शरीरमा भिटामिन डिको कमी हुुने नै भयो । सामान्य दिन हुँदो हो त मान्छेहरुले घरभित्र भन्दा बाहिर नै बढी समय गुजारिरहेका हुन्थे । यस्तो अवस्थामा घामको किरण प्राप्त हुन्थ्यो । र, प्राकृतिक रुपमा हाम्रो शरीरले भिटामिन डि प्राप्त गथ्र्यो ।
ब्रिटेनको नेशनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार महामारीको यो क्षणमा हरेक दिन १० माइक्रोग्राम भिटामिन लिनु जरुरी छ । खासगरी त्यस व्यक्तिका लागि यो आवश्यक हुन्छ जो घरभित्र समय बिताइरहेका छन् । ब्रिटेनमा त महामारी नहुँदा पनि जाडोको याममा अक्टुबर महिनादेखि मार्चसम्म भिटामिन डि अलग स्रोतबाट लिन सल्लाह दिइने गरेको छ ।
अहिले पब्लिक हेल्थ इंल्यान्ड (पीएचई)ले सधैभरी नै भिटामिन डिको सप्लिमेन्ट लिनका लागि सल्लाह दिने गरेको छ । पिएचइका अनुसार जो घर बाहिर जान पाउँदैनन् वा घरभित्रै बस्ने गर्छन् उनीहरुका लागि अतिरिक्त भिटामिन डि लिन जरुरी छ ।
जसलाई अतिरिक्त भिटामिन डिको जरुरी छ
उनीहरुका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट मात्र भिटामिन डि पर्याप्त हुँदैन । अतिरिक्त भिटामिन डि लिनुपर्ने हुन्छ ।
भिटामिन डिको आवश्यक्ता ?
यो एकदमै आम तर महत्वपूर्ण तथ्य हो कि, बलियो र स्वस्थ हड्डी, दाँत र मांसपेशीका लागि भिटामिन डि एकदमै जरुरी हुन्छ । यसको कमीले हड्डी कमजोर हुन्छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार भिटामिन डिले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ । यसले वाह्य संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ । केही अध्ययनबाट यो कुरा पनि पुष्टि भएको छ कि, भिटामिन डिको पर्याप्त उपलब्धताले सामान्य ज्वरो, फ्लुबाट बचाउँछ ।
हालै साइन्टिफिक एडभाइजरी कमिटी अन न्युट्रिशन (एसएसीएन) ले छातीको संक्रमण रोक्नका लागि भिटामिन डि कति उपयोगी हुनसक्छ भनेर समीक्षा गरेका छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस प्रमाण मिलेको छैन कि छातीको संक्रमण रोक्न भिटामिन डि उपयोगी छ वा छैन भनेर ।
के भिटामिन डिले कोरोना रोक्छ ?
नेशनल इन्स्टिच्युट फर हेल्थ एन्ड केयर एक्सलेन्सले भिटामिन डिमाथि गरेको अध्ययनको समीक्षमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रमाण पाइएको छैन कि जसको आधारमा भिटामिन डिको सप्लिमेन्टले कोभिड–१९ रोक्न सकिनेछ ।’
तर, महामारीको बेला शरीरमा पर्याप्त भिटामिन डि हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।
बीएमजे न्युट्रिशन प्रिभेन्सन एन्ड हेल्थको एक रिपोर्ट अनुसार ‘भिटामिन डि खास चिजका लागि दिनुपर्छ, कोभिड–१९ को बिरुद्ध होइन । यद्यपि भिटामिन डि हाम्रो शरीरमा पर्याप्त हुनु आवश्यक छ, यो स्वस्थ जीवनशैलीको हिस्सा हो ।’
केही अध्ययनबाट के थाहा भएको छ भने जसको शरीरमा भिटामिन डि कमी छ र उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण छ, उनीहरुको उपचारमा केही मुश्किल हुने गरेको छ ।
लिभरपुल युनिभर्सिटीका मेडिसिन प्रोफेसर जन रोड्सले भनेका छन्, ‘भिटामिन डिमा संक्रमण–रोधी ताकत हुन्छ र केही अध्ययनबाट थाहा भएको छ भाइरसको कारण शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रभावित हुन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा जसको फोक्सो नराम्ररी प्रभावित भएको छ, उनको हकमा भिटामिन डि प्रासंगिक हुनसक्छ । तर, यसका लागि अरुपनि खोज-अध्ययनको जरुरी छ ।’
आहार एवं भिटामिन डि
एक सन्तुलित आहारले तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सामान्य राख्न मद्दत गर्छ । यस्तो स्थितिमा कुनैपनि व्यक्तिले अरु केही लिन जरुरी छैन । तर, केवल आहारमा पर्याप्त भिटामिन डि पाउन मुश्किल छ ।
सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । यद्यपि सन्तुलित आहारभित्र के के समेटिनुपर्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ । भिटामिन डि माछा र अन्डामा प्राप्त हुन्छ । यसका लागि अन्न, घिउ र दहीमा पनि पाइन्छ ।
घाम भिटामिन डिको राम्रो र प्राकृतिक स्रोत हो । तर, यो मात्र पर्याप्त भने छैन । घाम ताप्दा पनि केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यदि अतिरिक्त भिटामिन डि आवश्यक भएमा कुनैपनि औषधि पसलबाट खरिद गर्न सकिन्छ । तर, भिटामिन डि कति लिने भन्ने सन्दर्भमा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ । अत्याधिक मात्रामा भिटामिन डि सेवन गर्दा मिर्गौला लगायतमा समस्या हुनसक्छ ।
यस अनुसार एकदेखि १० बर्षसम्मका बच्चाका लागि एक दिनमा ५० माइक्रोग्राम, शिशु अर्थात १२ महिनाभन्दा कम उमेरकालाई २५ माइक्रोग्राम र वयस्कलाई एक दिनमा १०० माइक्रोग्राम मात्र भिटामिन डि क्याप्सुल लिन उचित हुन्छ ।